Imithetho Emisha Yemingcele Yezivakashi ZaseCanada: Izizwe eziyi-10 zaseMelika zizokwamukela abantu baseCanada ngezandla ezifudumele
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Imithetho Emisha Yemingcele Yezivakashi ZaseCanada: Izizwe eziyi-10 zaseMelika zizokwamukela abantu baseCanada ngezandla ezifudumele
Izindaba Ezintsha • ICanada Breaking News • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba Ezintsha zaseHawaii • I-LGBTQ • IMexico Breaking News • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
AbaseMexico nabaseCanada manje sebengahlela iholidi laseMelika e-United States. Kusukela ngoNovemba 1, uHomeland Security e-US uzovula kabusha imikhawulo yomhlaba phakathi komakhelwane base-US ngokuhamba okungabalulekile, kufaka phakathi ezokuvakasha.
I-White House iqinisekise ngoLwesibili ebusuku ukuthi izivakashi ezigonywe ngokuphelele ezivela eCanada zizokwazi ukuya e-United States lapho kunqunywa khona imingcele yomhlaba kusukela ngoNovemba 1.
Akuzange kuchazwe ukuthi imiphi imithi yokugoma ezokwamukelwa noma uma ngabe amanani okuxuba azofaneleka yini.
Imingcele yase-US yezivakashi zaseMexico nayo izovulwa ngoNovemba 1
Labo abanikeza ubufakazi bokugoma futhi ababheke ukuvakashela imindeni noma abangane abafika njengabavakashi noma abathengi bazovunyelwa ukungena eMelika futhi kusukela ngoNovemba.
UMengameli wase-United States uBiden uphakamise ukuvinjelwa okufanayo kubantu bakwamanye amazwe abafuna ukuhambela kuleli bevela phesheya kwezilwandle, kubandakanya ne-Europe.
Ukuphakanyiswa okufanayo kwemingcele kuzosebenza emingceleni yomhlaba phakathi kwe-United States neMexico.
Lesi yisinyathelo esamukelekayo sokuvulwa kabusha kweMboni Yomhlaba wonke Yezokuvakasha Nezokuvakasha.
Ngaphambi kobhadane lwango-2019, kwakunezivakashi ezingaba yizigidi ezingama-20.72 ezivela eCanada ziya e-United States.
Abangaphezu kwezigidi eziyi-4.1 baseCanada bavakashela eFlorida minyaka yonke kubandakanya izivakashi eziningi zesikhashana nezinyoni eziningi zeqhwa zasebusika zesikhathi eside.
Abantu baseCanada abangaphezu kwezigidi eziyi-3.1 bavakashela eNew York minyaka yonke. Ukuheha okungu- # 1 kuyiqiniso iNew York City, Elinye lamadolobha amakhulu emhlabeni, iNew York ihlala iyisivunguvungu somsebenzi, enezingosi ezidumile ngaso sonke isikhathi futhi ayinaso isikhathi esanele sokubabona bonke kubandakanya imibukiso yemigwaqo ebanzi, esezingeni lomhlaba ukuthenga, iSitatimende Sokukhululeka, i-Empire State Building, iBrooklyn Bridge, iCentral Park, neminyuziyamu eminingi edumile emhlabeni.
Abantu baseCanada abangaphezu kwezigidi ezi-2.5 bavakashela izwe laseWashington minyaka yonke ngokufinyelela okulula kokushayela okungasemaphethelweni esifundazwe saseBritish Columbia. ISeattle iyisango eliya esifundeni sasePacific Northwest, lapho izintaba ezimangalisayo zibukeka phezu kwamahlathi aluhlaza nezindawo ezisogwini ezimangalisayo. Amapaki amabili kazwelonke, iMount Rainier neOlimpiki, anikeza ukuhlangana okuhle nemvelo njengaseziQhingini zaseSan Juan ngasogwini.
Abantu baseCanada abangaphezu kwezigidi eziyi-1.6 bavakashela eCalifornia minyaka yonke. Amadolobha amakhulu, amabhishi, amapaki okuzijabulisa, nezimangaliso zemvelo njengakwezinye izindawo emhlabeni kwenza iCalifornia izwe elihehayo lamathuba wabahambi. Amadolobha amasango eSan Francisco naseLos Angeles ayikhaya lezindawo ezaziwa kakhulu zombuso, kusukela eGolden Gate Bridge kuya eHollywood naseDisneyland.
Abantu baseCanada abangaphezu kwezigidi eziyi-1.3 bavakashela iNevada minyaka yonke, iningi labo lifika eLas Vegas. Izindawo ezimangalisayo zeNevada zivame ukusibekelwa ubucwebecwebe nobukhazikhazi bedolobha elikhulu kunawo wonke, iLas Vegas. INevada iyisimo sokuhlukahluka kwemvelo okumangalisayo, enezindawo eziningi ezinhle ongazivakashela, amadrayivu abukekayo, namathuba amahle emisebenzi yangaphandle ezindaweni zabo zokupaka zikazwelonke nezindawo zokuzijabulisa.
Abangaphezu kwezigidi eziyi-1.3 baseCanada bavakashela eMichigan minyaka yonke nabahambi abaningi basehlobo abashayela behla besuka e-Ontario. IMichigan yikhaya lezindawo ezinhle, amachibi amahle, ukudla okuhle, izindawo ezi-quirky namagugu afihliwe. Lo mbuso omangalisayo unqamula amaLwandle amaGreat 4 futhi uqukethe amachibi angaphakathi kwezwe angaphezulu kwe-11,000, asakazeka kuwo wonke ama-peninsula asezansi nangaphezulu okwenza kube yindawo eshisayo ehlobo kubantu baseCanada.
Abantu baseCanada abangaphezu kwesigidi bavakashela i-Arizona unyaka nonyaka kusuka kubavakashi besikhashana kuya ezinyonini zesikhathi eside zeqhwa. Enhliziyweni yeNingizimu-ntshonalanga yaseMelika, i-Arizona igcwele izimangaliso zemvelo, amadolobha aphilayo, namadolobha amancane amahle. Lesi sifundazwe sinakho konke kusuka eGrand Canyon, amadwala abomvu akwaSedona, izwe lewayini, amachibi amahle, izintaba, izintaba, amagquma eqhwa ebusika, imicimbi yezemidlalo esezingeni lomhlaba kanye nesimo sezulu esimangazayo.
Abantu baseCanada abangaphezu kuka-800,000 XNUMX bavakashela eHawaii minyaka yonke. Iziqhingi zaseHawaii zaziwa ngamathafa awo amangelengele amawa, izimpophoma, amahlamvu asezindaweni ezishisayo namabhishi anezihlabathi zegolide, ezibomvu, ezimnyama noma eziluhlaza. Unyaka wonke eduze kwesimo sezulu esikahle ngempilo enhle yokuphumula kwenze iHawaii yaba yindawo ethandwayo yokuphunyuka ebusika kubantu baseCanada! Iziqhingi eziyisithupha ezihlukile zinikeza okuhlangenwe nakho okuhlukile okuzoheha noma yimuphi umuntu ohambahambayo.
Abantu baseCanada abangaphezu kuka-750,000 bavakashela eMaine minyaka yonke. Cishe umuntu oyedwa kwabayisithupha abavakashela eMaine uvela eCanada, cishe isigamu salabo abavela e-Ontario. Isimo saseMaine, esibizwa nge-Vacationland, singaphezu kwendawo oya kuyo, kungokuhlangenwe nakho okuzokuphefumula. IMaine ifaka konke okungokoqobo, okuhlukile futhi okulula, nokujabulela izikhala ezivulekile ezibanzi zezinkuni ezijulile zombuso nolwandle olusebenzayo.
Abantu baseCanada abangaphezu kwezi-680,000 bavakashela iPennsylvania unyaka nonyaka. Amadolobha asePennsylvania asezingeni eliphakeme nokuheha okuhle kwangaphandle kukukhomba ukuthi uhlole imisebenzi eminingi ehlukahlukene. Ungabona iLiberty Bell edumile ePhiladelphia, uhambe ezinyathelweni zamaqhawe empi e-Civil War eGettysburg, noma ucwilise amasiko athile eCarnegie Museums ePittsburgh.
Isihluku Esinodlame Olwa-Vax Stormos London London Studios